ဒေါက်တာအေးမောင် အား ပြန်လွှတ်ပေးရေးနှင့် မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်အား အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရေး ကျောက်? - Yangon Media Group
ကျောက်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေး မောင်အား ပြန်လွှတ်ပေးရေးနှင့် မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်အား အမှုမှန် ဖော်ထုတ်ပေးရေး ကျောက်တော် ဒေသခံ ၂ဝဝ ကျော်မှ ဆန္ဒထုတ် ဖော်တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၈ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ရခိုင် ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ရှိ သာသနာ့ဗိမာန်မှစတင်ကာ မြို့ပတ် လမ်းတစ်လျှောက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
”လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရလည်း ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ ခရီးကြမ်းကိုလျှောက်လှမ်းပြီးမှ ထောင်အလီလီကျပြီးမှ အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်း လိုက်လျောပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ် ရေး၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးတွေ အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆန္ဒပြပွဲတွင် ဦးဆောင်သူ ဦးကျော်လှမြင့်က ပြောကြားသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် မြို့ခံအင်အား ၂ဝဝကျော်သည် မြို့ တွင်း၌ ဗီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင် ဆောင်ကာ ကြွေးကြော်ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် စာရေးဆရာ ဝေဟင်အောင်တို့သည် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်က ရသေ့တောင်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော် ကျဆုံးခြင်းအခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံ တော်ကို အကြည်အညိုပျက်စေသည့်စကားများကိုသုံးခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရ ခြင်းဖြစ်ပြီး မြောက်ဦးမြို့တွင်လည်း ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကျဆုံးခြင်းအခမ်းအနား ပြုလုပ်ခွင့်မရ၍ လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ကာ အရပ်သားခုနစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ဝလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကစားသမားဘဝတွင် ပင်နယ်တီသွင်းဂိုး ၁ဝဝ ကျော်ခဲ့သည့် စီရော်နယ်ဒို
ယခု ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းကားအစီး ၁ဝဝ ထိ ပြေးဆွဲနိုင်ရန် စီစဉ်ထား
ဘက်လိုက်မှု ကင်းခြင်း စံနှုန်းကို အမြင့်မားဆုံး ထိန်းသိမ်းပြီး အဂတိ လိုက်စားမှုများကို ကိုင်??